Fifanarahana Aquarius | Fifanarahana Zodiac & Horoscope - Famantarana Zodiac
Fifanarahana Aquarius: Amin'ny fitiavana sy amin'ny fandriana
Ny olon-kendry gypana izay manapotika ny fitsipi-panjakan'ny fiaraha-monina dia mipi-maso iray monja.
Ilay mpahita rahampitso tsara kokoa.
Ny maha-olona revolisionera izay miasa ny lalana ka ny sisa amintsika dia manana fotoana mora kokoa miakatra amin'ny vanim-potoana volamena.
Ity dia i Aquarius.
Ary inona no ifandraisan'izany rehetra izany amin'ny fahafahany mampifanaraka?
Ny famantarana fahiraika ambin'ny folo an'ny Zodiac Aquarius dia nahatratra ny dingana 'efa teo, vita an'io' ny fanombohana ny fanahy. Ny fotoanan'ny fanahin'izy ireo nofonosina amin'ny tenany dia tapitra ary ny fifantohan'izy ireo dia amin'ny 'we' miaraka.
Tena tian'ny Aquarius ny zava-manan'aina rehetra ka tsy an'ny 'iray' ny fony fa an'ny rehetra iray.
Fampifanarahana Aquarius Lisitry ny atiny
Mifanaraka amin'ireo famantarana tsirairay
Fifanarahana Aquarius amin'ny fitiavana
Ireo teraka teo ambanin'ny mariky ny Aquarius dia tsy maika amin'ny fitiavana na fanoloran-tena. Ny dingana voalohany amin'ny fifandraisanareo dia malefaka sy maivana. Izany dia satria ianao dia bitika kely, matetika maka mpitia marobe mahita anao somary te hahafanta-javatra. Manana teny sy fihetsika tsy ampoizina foana ianao (heck, indraindray aza gaga ianao!).
Amin'ny maha Aquarius anao dia mila filàna voajanahary amin'ny toerana mety tsy ho takatry ny mpiara-miasa aminao ianao. Tsara sy tsara daholo ny anao raha manana fotoana sy tsiambaratelo ianao, fa ampiresaho amin'ny vadinao izany. Ny famantaranandro anaty rano anaty rano dia tsy toy ny famantarana maro hafa ary tsy mila mpiara-miombon'antoka mandray ianao mihevitra fa nandao azy ireo tanteraka. Ny fahatarana, na aloha, na any amin'ny toerana tsy ampoizina tanteraka dia tranga mahazatra ho anao, fa ny sisa amin'ny fiarahamonina kosa dia mahita fa manjavozavo ny fonosana iray manontolo.
Ho an'ireo izay mampiaraka amin'ny Aquarian, tsy afaka ny ho clingy ianao. Izany dia hahatonga ny Mpitondra Rano mankeny amin'ny havoana amin'ny fo iray! Tokony avelanao handihy amin'ny mozika anatiny ao anatiny ry zareo. Ity famantarana ity dia tsy mamela ny olona hamakivaky ny sakana raha tsy efa voaditra tsara sy vonona izy ireo. Ary mpiara-miasa saro-piaro? Avelao izao izany hevitra izany.
Rehefa mahafantatra ny Aquariano ianao dia ataovy fialamboly izany. Aza barrage amin'ny fanontaniana 101 momba ny loko sy sakafo ankafizinao. Ny famantarana Aquarius dia mahita fa feno rà mandriaka io fivoriambe rehetra io.
Etsy ankilany raha afaka mahita hetsika mahafinaritra samy hafa izay misy fiatraikany ara-nofo ambony ianao dia mpandrafitra tetezana tsara izany.
Manampia angovo erotika kely amin'ilay afangaro, ary manomboka mihetsika ny zavatra. Zavatra tokony hialana? Fanavakavahana, adilahy, fahamendrehana ary fieboeboana raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy.
Raha ny fanazavana, dia 'OK' tokoa ny somary adala ary ivelan'ny boaty miaraka amin'ny Aquarius. Miaina ao amin'io sehatra io izy ireo ary mankafy ireo mpiara-miasa afaka manazava an'izao tontolo izao iray minitra ary hanana fahatsapana feno amin'ny manaraka.
Ny finamanana angamba no zavatra tokana ankafizin'ity Star Sign ity. Meteza ho namana akaiky azy amin'ny sehatra hafa fa tsy fitiavana, ary koa resaho am-pientanam-po ny namana hafa sy ny zava-bitany. Ny Aquarians dia mahita fa tena mahafinaritra ilay karazana fifandraisana ara-pientanam-po ary fomba iray hafa hampihenana ny fiarovana azy ireo izany.
Amin'ny ankapobeny raha mahatsapa lalina ny zavatra i Aquarius, tsy asehon'izy ireo izany. Misy rindrina fiarovana izay afenin'ny Aquarians ao aorin'izany raha manomboka mahatsapa ho marefo izy ireo. Mety handeha lavitra mihitsy aza izy ireo hanosika ilay olona ifankatiavany mihitsy.
Fifanarahana Aquarius ao am-pandriana
Amin'ny maha Aquarian anao dia hitanao fa fanandramana ara-tsaina ny firaisana. Miezaka mamorona fomba vaovao tsy tapaka ianao hahafinaritra ny mpiara-miasa aminao. Betsaka ny olona no hahita ny tenany hirotsaka tanteraka na dia miadana aza ianao manolo-tena amin'ny fifandraisana lalina, fa haingana handray horonana ao anaty ahitra.
Ny fifandraisanao amin'ny olon-tianao dia miankina betsaka amin'ny toetranao sy ny toerana alehan'ny eritreritrao amin'izay andro izay. Indray mandeha ianao dia hivoaka toy ny tigra ary ny tera-dahy mandehandeha manaraka. Midika izany fa mila mpiara-miasa miovaova ianao izay manam-paharetana amin'ny fiovanao. Ho valin'izay dia manome valisoa ny vadinao amin'ny fitiavana feno loko sy fanandramana ianao izay tsy mankaleo velively.
Amin'ny maha famantarana famantarana ny rivotra anao dia mety mankafy miresaka momba ireo zavatra araraotinao ianao taloha, mandritra ary aorian'ny firaisana. Turner goavana io! Ankoatr'izay, arakaraka ny fahafahanao mahazo ny olon-tianao no mahafa-po anao sy manome anao.
Raha vantany vao avelan'ny olon-tiana Aquarian hiditra ao ny olona iray, dia mafana fo tanteraka ny fifanakalozana ara-nofo ary feno nofinofy.
Zava-misy Aquarius & Fikambanana Metaphysical
Daty: 20 Janoary - 18 Febroary
Andian-teny lehibe: 'Fantatro'
Planeta: Uranus (Saturnus)
Birthstone: Garnet (Janoary); Amethyst (Febroary)
Nomery hovitrovitra: Nomery: 8
Singa: Rivotra fa miaraka amin'ny lehibe Rano fitaomana.
Loko: Lanitra manga
Kambana Zodiac Sinoa: Tigra
Kambana Zodiac Shinoa mahatsikaiky: Tigra
Fikambanan'ny Tarot Card: Ilay kintana
Kristaly fanasitranana: ametysta , Amber, Aquamarine, Garnet, Hematite, Lapis Lazuli, Turquoise
Aquarius malaza: Oprah Winfrey, Sarah Palin, Adam Lambert, Vanessa Redgrave, Whoopi Goldberg, Christian Bale
Aries lehilahy libra vehivavy eo am-pandriana
Fifanarahana Aquarius amin'ireo famantarana Zodiaka 12 rehetra
Aries sy Aquarius
Ny Aries mpihaza mandrakariva dia afaka manetsiketsika ny tontolon'ny Aquarian iray na ao anaty na avy eo am-pandriana!
Ianareo roa dia samy manana fientanam-po amin'ny fiainana sy fahalalahana ary azo antoka fa manana ny dinamika rehetra handosirana ity fifandraisana ity. Matetika ianao no mifandona dia amin'ny lafiny idealy sy soatoavinao. Te hanasitrana an'izao tontolo izao i Aquarius raha somary variana amin'ny tenany ihany i Aries.
Matetika ianao dia mitarika anao amin'ny 'fifanakalozan-kevitra' mahery izay mitaky marimaritra iraisana na dia manaiky ny tsy hiombon-kevitra aza.
Taurus sy Aquarius
Ny fanahinao Aquarius dia mahita ny toetra voajanahary sy ny fahatsoran'ny Taurus tena mamelombelona. Ny olana tokana dia ny vatana Bull ny tenanao raha lolo ianao, ry Aquarius malalako.
Amin'ny fifandraisana maharitra dia mety ho hitanao fa tsy dia mahomby loatra ny fomba nentim-paharazana an'ny Taurus. Ary tsy izany ihany no fomba tsy itovizanao.
Ny zava-drehetra manomboka amin'ny sakafo ka hatramin'ny boky dia toa fifandirana avokoa. Manampy ireo tadiny roa mafy loha mafy ary tsy azo inoana fa afaka manao adaptation ampy hiasa ireo mpivady ireo.
Gemini sy Aquarius
Oooh! Nahita fanjonoana lehibe ve ianao teto teto!
Ny zava-drehetra momba an'i Gemini dia manintona anao amin'ny fomba manintona fa noho ny tsy fahampian'ny toetra azo vinavinaina mialoha. Ny fahaizan'ny Gemini, ny fahaizany miresaka ary ny faharanitan-tsainy dia tena miresaka amin'ny fanahinao.
Eny misy ny tsy fitoviana, fa amin'ny ankapobeny ity mpivady ity dia mahita faniriana mafy sy fomba fijery mifanentana amin'ny fiainana.
Rehefa mifantoka amin'ireo fahita ireo dia misy fiaraha-miasa lehibe feno fifaliana.
Kansera sy Aquarius
Ny Aquarius sy ny Kansera dia mety ho lalao mety satria samy malala-tanana tokoa izy ireo. Ao anatin'ny sehatry ny fifandraisanareo dia samy mahay mikolokolo sy manohana ny tanjon'ny hafa.
Ny lavaka lehibe amin'ny làlam-piainanao dia ny mahaleo tena mahaleo tena kokoa raha ny homamiadana kosa mitady fotoana tokana.
Ny foza dia mety hanaporofo fa sahirana loatra raha tsy ho zakan'ny Aquarius mandritra ny fotoana lava.
Leo sy Aquarius
Amin'ity fifandraisana ity, ny Aquarius dia mamerina tsy tapaka, 'mihamazava.' Leo na mpanjaka mpanjaka na tantara an-tsehatra foana i Leo raha toa ka liana kokoa amin'ilay seho manontolo i Aquarius.
Ny toetra maha-sariaka an'ireo famantarana roa ireo dia mety miasa mandritra ny fotoana filalaovana, fa ny toetra ara-tsosialy misy ao amin'izy ireo dia midika hoe handany fotoana be ianao.
Sarotra ny mamorona fifankatiavana, aleo ihany mitady tany afovoany izay hipetrahan'ny tsy fitovian-kevitrao.
Virgo sy Aquarius
Ny fiarahan'ny Aquarius sy Virgo dia miasa tsara kokoa amin'ny maha mpinamana.
Afaka miresaka mandritra ny tontolo andro ianareo roa fa tsy ho lany lohahevitra velively. Na izany aza, tsy misy fanontaniana fa manana Grand Canyon feno fahasamihafana ianao. Manana hevitra lehibe i Aquarius izay ifantohan'ny Virgo sy ara-dalàna kokoa.
Raha tsy misy antony hafa amin'ny Astrolojia, dia tsy manana fiainam-pitiavana lehibe koa ireo roa ireo.
Libra sy Aquarius
Mitsangàna ary hamirapiratra ianareo vorona tia roa!
Ny lalao Aquarius sy Libra dia natao tany an-danitra. Misy mora ny miaraka miaraka amin'izy samy izy izay sarotra faritana - toy ny fiovam-piraisan'ny fanahy roa izay manana 'tena fitiavana' voasoratra ao amin'ny endriny.
Aquarius hitanao mitovy ny fahaizan'ny manam-pahaizana eto, ary ny iray mankafy ny haavon'ny hetsikao. Aleo ihany, manana namana be fandavan-tena (karazana fifandraisana tianao indrindra!) Izay mifandraika aminao amin'ny ambaratonga samihafa
Scorpio sy Aquarius
Ilay scorpio manaitaitra sy mistika dia manintona ny masonao Aquarian indrindra rehefa mitady fotoana mahafinaritra ianao. Rehefa miara-milalao ianao dia toy ny hoe eny ny fiainana. Mifampitsiky ianareo.
Misy faritra sasany amin'ity fifandraisana ity izay mifanalavitra amin'ny lafiny roa. Ny Scorpioo dia mandeha amin'ny instinct raha matoky ny sainao ianao. Izany dia toy ny fiezahana mihazakazaka fo mandeha amin'ny herin'ny AC amin'ny angovo DC.
Vokatr'izany, na dia misy sparks rehetra manidina eo anelanelanao ara-batana aza ity ity dia mety ho sarotra ny mamaha azy.
Sagittarius sy Aquarius
Raha hamintina ny fifandraisana Aquarius sy Sagittarius isika dia hamporisika ny teny fototra.
Ny tombontsoanao ara-tsosialy sy ara-javakanto dia mitovy amin'ny mofo sy dibera. Rehefa tratry ny tadio mahery i Aquarius, manome azy ireo lalana sy tanjona lehibe kokoa ho an'ny brouhaha i Sagittarius.
Satria samy mahaleo tena ianareo dia tsy misy ahiahy momba ny fahalalahana ary rehefa tafaraka amin'ny tetik'asa dia tena mahafa-po ny valiny.
Capricorn sy Aquarius
Meh! Ankafizinao ny fahaizan'ny Capricorn ho an'ny fifantohana fa tsy azonao an-tsaina ny fandinihana be loatra momba ny zava-drehetra ao anatin'izany ny ba kiraro! Ny Aquarians dia zaza tsy manan-tongotra ao amin'ny Universe raha Capricorn kosa azo ampiharina maharitra.
Ny tsy fahampian'ny herin-tena dia manimba ny mety ho vokatr'io fifandraisana io.
Azonao atao anefa ny tonga mpinamana (na dia namana misy tombony aza) ary mianatra toetra manandanja avy amin'ny tsirairay.
Aquarius sy Aquarius
Ny fatorana amin'ny fifandraisana Aquarius sy Aquarius dia eo noho eo ary matanjaka toy ny lakaoly lehibe. Mifankahazo tanteraka ianareo sy ny filanareo hitandrina ny raharaha amin'ny voalohany.
Azo inoana fa ny daty voalohany nataonao dia ny fitsangantsanganana ara-tsosialin'ny raharaham-pandaminana izay handanianao ora maro hifanakalozana hevitra momba ireo singa samihafa. Ny fanamby amin'ity fifandraisana ity dia ny manafana azy.
Ny Aquarians dia mety ho lavitra, noho izany dia mila miasa amin'io singa io matetika ianareo roa isan'andro.
Pisces sy Aquarius
Mety nihaona tamina adihevitra filozofia na raharaha akademika ianao, samy voasarika ho amin'ny fikatsahana fahaizana. Ny mahaliana dia samy manonofy ihany koa ny Aquarius sy ny Pisces. Manamora ny fahitana iray eo amin'ny samy izy ianao.
Ny olana eto dia ny fametrahana fototra mafy orina. Fanampin'izany, indraindray ny fifandraisanao dia mijaly noho ny fijerin'ny olom-pirenena Piscean tsy voatanisa.
Amin'ny ankapobeny dia mety hahita mpiara-miasa Pisces ianao sahirana ho anao.
tahaka ny inona ny gemini
fifandraisan'ny lehilahy sagittarius sy ny vehivavy sagittarius
ny planeta mihodikodina manakaiky ny masoandro dia